नेपाली मुलका यी हेण्डसम सँग प्रेममा परेपछी नेपालकी बुहारी बन्ने भइन अभिनेत्री श्रद्धा कपूर - सुदूर नेपाल
Dinesh khaptadi March 22, 2019 0
काठमाडौँ : केही समय अगाडी बलिउड अभिनेता फरहान अख्तरको अफयरमा रहेको भनिएकी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर नेपाली मूलका युवा रोहन श्रेष्ठको प्रेममा रहेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख भएको छ ।
बलिउड प्रोफेहनल फोटोग्राफ समेत रहेका रोहन र श्रद्धा अफयरमा रहेको चर्चा भएसँगै उनीहरुले घरजम गर्न लागेको कुरा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । श्रद्धा र रोहन बाल्यकालको साथी हुन् । नेपाली मुलका रोहनको पिता कामको सिलसिलामा मुम्बाई पुगेपछि रोहनको परिवार उतै सेटल भएको हो । ३३ वर्षिय अभिनेत्री श्रद्धाले अर्को वर्ष मे सम्ममा घरजा गरिसक्ने तयारी गरेकी छन् ।
रोहन बलिउडका चर्चित फोटोग्राफ राकेश श्रेष्ठका छोरा हुन् । श्रद्धा र रोहनले स्कुल र कलेज सँगै पढेका हुन् । रोहन बलिउड चर्चित अभिनेता अर्जुन कपूर, वरुण धवन, रणवीर सिंह र रणवीर कपूरसँग नजिक रहेका छन् । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रद्धा ब्याटमिन्टन खेलाडी साइना नेव्हालको जीवनीमा आधारित फिल्म छोडेपछि चर्चामा रहेकी छन् । उनी अहिले बाहुबली फेम प्रभाससँग गरेको फिल्म साहो रिलिजको तयारीमा छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :-पछिल्लो समय नेपाली युवाहरु स्वदेश छाडेर विदेश जाने क्रम निकै बढ्दो छ । हुन त यसो गर्नु आ -आफ्नो बाध्यता पनि होला तर गरे नेपालमै के हुन्न र भन्ने उदारण हो आयरल्याण्डबाट आएका यी चर्ली बाबा । उनी विगत लामो समयदेखि नेपालमै कृषि पेशमा अबद्ध छन् । उनी हरेक शनिबार तरकारी बेच्न काठमाण्डौं आउँछन् र फेरी उही कर्मथलो काभ्रे फर्किन्छन् । नेपालमा अाएर गाइपालन र तरकारी खेति गरिरहेका उनी निकै सन्तुष्ट पनि छन् । हिजो आज उनी कृषिका विभिन्न कार्यहरुमा व्यस्त छन् । आखिर नेपालमा के सम्भावना देखेर अडेका छन् त ती चार्ली बाबा ? के छ उनको भावी योजना ?
Previous Post: भारतीयले नेपालको बारेमा बनाएको यस्तो भिडियो जुन तपाईले हेरेपछि छक्क पर्नुहुने छ,(भिडियो)
Next Post: पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस चैत्र ९ गते शनिवारको राशीफल,के लेखिएको छ तपाईको भाग्यमा